[झटारो] मन्त्रीज्यूको सारगर्वित मन्तव्य - व्यंग्य - प्रकाशितः भाद्र १२, २०७४ - नेपाल
[झटारो] मन्त्रीज्यूको सारगर्वित मन्तव्य
माननीय मन्त्री श्री गोपाल दहितजी दाङको एक सार्वजनिक समारोहमा आज्ञा गर्नुहुन्छ :
‘मुक्त कमलरी परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम’जस्तो एउटा सामान्य कार्यक्रम भए पनि तपाईंहरूको अनुरोध टार्न नसकेर अत्यन्त व्यस्तताका बाबजुद म यहाँ आएको छु । प्रमुख अतिथिका लागि कुनै निवेदन चढाएर आएको होइन । तर, तपाईंहरूको लागि प्रमुख अतिथि भएर यहाँ आउँदा ममाथि घोर अपमान भएको छ । आज मलाई अरू कुरा गर्न इच्छा छैन ।
अगाडि मञ्चमा एक जना मान्छे उपरखुट्टी लगाएर बसेको तपाईंहरूले देखिरहनुभएको छ । बिनाहिचकिचाहट, बिनालाजसरम, अतिथिको आसनमा । उहाँ हुनुहुन्छ, यो जिल्लाको सीडीओसाप । कुन्नि के श्रेष्ठ रे ! नाम मलाई थाहा छैन । थाहा भए पनि त्यो नाम लिएर म आफ्नाे जिब्रोलाई अपवित्र पार्न चाहन्नँ । नामका पछाडि श्रेष्ठ तर काम हेर्नूस् कति निकृष्ट । उहाँले आज मलाई गरेको अपमान जीवनभरि बिर्सन नसकिने छ । यसबारे तपाईंहरूले पनि थाहा पाउनुपर्छ ।
म साढे चार दर्जन सदस्य भएको मन्त्रिपरिषद्को एघारौँ वरीयताको मन्त्री हुँ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहै रहेनछ । मन्त्रीमा पनि पीएचडी गरेको विद्वान् मन्त्री म । यस्तो विशिष्ट व्यक्तिलाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने पनि नजानी उहाँ कसरी सीडीओ हुनुभयो, मलाई आश्चर्य लागेको छ ।
मैले एलडीओसहित अरू कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीकै अगाडि यी सीडीओलाई तथानाम गाली गरेको थिएँ । मलाई लागेको थियो, त्यति गाली खाएपछि उहाँ मेरो छेउछाउ आउने आँट नगर्नुहोला । तर, सरम नै नभएपछि के लाग्छ † यहाँ उहाँलाई देखेपछि मेरो रिस फेरि जागेर आएको छ । अझै गाली गर्न मन लागेर आएको छ । तपाईंहरूका अगाडि फोहोरी गाली त म गर्दिनँ तर मैले गर्ने गालीमा तपाईं आफैँले फोहोरी शब्दहरू पनि थपेर बुझ्नुहोला ।
जब म नेपालगन्जको एअरपोर्टमा उत्रिएँ र वरपर हेरेँ, कतै कार्पेट–सार्पेट ओछ्याएको छैन । बाहिर आएर हेर्छु, दुई–चार पुलिस र एक–दुई जना कर्मचारी मात्रै छन् । मैले सोचेको थिएँ, जिल्लाका सबै कर्मचारी, पुलिस, नेतासहितको ठूलो भीड मलाई लिन आएका होलान् । सय–पचास नभए पनि २५ किलोसम्मको माला लगाइदेलान्, त्यो सब केही बन्दोबस्त छैन । मलाई एउटा सेकेन्डहेन्ड खादा पठाएर सीडीओ जिल्लामै नाचेर बस्ने ? ल हेर्नूस्, कति हेपेको !
गाडी हेर्नूस् गाडी, सीडीओले मलाई लिन पठाएको एउटा कवाडी गाडी । त्यो पनि बिनाझन्डावाल । मन्त्री चढ्ने गाडीमा झन्डा लगाउनुपर्छ भन्ने एउटा सीडीओलाई थाहा हुँदैन ? म थोडै त्यस्तो कवाडी गाडीमा चढ्ने मान्छे हो ? ल हेर्नूस्, पाइला–पाइलामा मेरो अपमान ! अरूलाई अपमान गर्नेले अरूबाट पनि अपमानित हुनुपर्छ भन्ने थाहा छैन, सीडीओलाई ?
अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने एउटा वरिष्ठ मन्त्रीजस्तो भीभीआईपीलाई एउटा राम्रो झन्डावाल गाडी पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने यस्तो गैरजिम्मेवार सीडीओको हाम्रो सरकारलाई कुनै आवश्यकता छैन । म काठमाडौँ गएर यी सीडीओलाई अवकाशको चिट्ठी पठाइदिन्छु, ताकि फेरि अर्को कुनै मन्त्रीले यस्तो अपमान सहनु नपरोस् । यति भन्दै म मेरो सारगर्वित मन्तव्य यहीँ टुंग्याउँछु, धन्यवाद ।